यी टिप्स अपनाउनुहोस्, Blood Pressure low बाट छुटकारा पाउनुहोस् ! – Nepal News
यी टिप्स अपनाउनुहोस्, Blood Pressure low बाट छुटकारा पाउनुहोस् !
उच्च रक्तचाप भएजस्तै कतिपयलाई ब्लड प्रेसर लो हुने गर्छ । रक्तचाप न्यून भएका बिरामीहरुलाई पनि समान हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्नेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । तपाई वा तपाईको कोही आफन्तजन न्यून छ भने तपाईले निम्न उल्लेखित तरिका अप्नाउन सक्नुहुन्छ ।
मदिरा त्याग्ने र बढी पानी पिउने
मदिरा पिउदा रक्तचाप बढ्छ भन्ने धारणा पनि पाइन्छ । हरेक १० ग्राम रक्सी पिउँदा तपाईको प्रेस १ एमएमएचजीले बृद्धि हुन्छ । तर न्यून रक्तचाप छ भन्दैमा कहिल्यै पनि मदिरा पिउने भूल नगर्नुहोस ।
अत्यधिक अल्कोहलको मात्राले डि–हाइडे«सन ल्याउछ र झन् रक्तचापको मात्रा घट्छ । बरु पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुहोस जसले रक्त प्रवाह सशक्त र तीब्र हुन्छ । शरीरमा पानीको मात्रा बढी भएमा पनि न्यून रक्तचापबाट थोरै मात्रामा भएमा जोगिन सकिन्छ ।
रक्तचाप बढी भएको अवस्थामा निश्चय नै नुनको मात्रा घटाउनु बुद्धिमानी हुने छ। तर रक्तचाप कमि भयो भन्दैमा नुनको मात्रा बढाउनु कदापी राम्रो होइन । नुनको मात्रा बृद्धि गर्दा उच्च रक्तचापको खतरामा बढाउछ, अंगहरुलाई असर गर्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य जटिलता ल्याउँछ । चिकित्सकले सुझाव दिएको दैनिक २ देखि ३ एमजी नुनमात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आकस्मिक शारिरिक गतिविधि त्याग्नुहोस
आँखा धमिलो देखिनु र टाउको हल्का दुख्नु न्युन रक्तचापका लक्षणहरु भएकोले शरिरको पोजिसन परिवर्तन गर्दा विशेष सावधानी पुयाउनुहोस् । बेडबाट उठ्दा वा बसिरहेको कुनै स्थानबाट उठ्दा यस्तो ख्याल गर्नुपर्छ । झटपट उठ्दा रक्तचाप न्यून भएको बेला आँखा धमिलो हुने वा दुर्घटना निम्तिन सक्छ । तसर्थ उभिनुभन्दा अगाडि पैतला र खुट्टालाई हल्का दबाउनुहोस । ओछ्यानबाट उठ्नुअघि पनि ओछ्यानमा केही सेकेन्ड बसेर मात्र उभिनुहोस् ।
उच्च कार्बोहाइड्रेडयुक्त खानाको मात्रा कम खानुहोस
न्यून रक्तचाप भएका मानिसलाई सामान्यतया उच्च कार्बोहाइड्रेडयुक्त खानेकुरा खान सुझाब दिइदैन । कार्बोहाइडे«डयुक्त खानेकुरा घटाउदा सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर घट्ने र खाना खाएपछि हुने हाइपरटेन्सन (पोस्टपेन्डियल) घट्छ ।
तातो पानी र स्टिम नलिनुहोस
लामो समयसम्म तातो पानीले नुहाउँदा वा वाफ लिदा आँखा धमिलो हुने र हल्का टाउको दुख्छ । तसर्थ आरामदायी वाथ ट्युबमा सुतेर तातो पानीले ननुहाउनुहोस । बरु यसको सट्टा कुर्चीमा बस्नुहोस । सकभर कुर्चीमा बसेर नहुाउनुहोस् । कुर्चीबाट उठ्दा पैतला तथा खुट्टालाई एक पटक हल्का दबाएर मात्र उठ्नुहोस् ।
बारम्बार खाना खानुहोस
रक्तचाप न्यून भएका मानिसहरुमा खानापछि हाइपरटेन्सन वा आँखा धमिलो हुने समस्या हुने भएकोले एकै पटक धेरै खाना नखानुहोस् । बरु हरेक दुई दुई घन्टामा थोरै थोरै खानुहोस् । एजेन्सीको सहयोगबाट
ट्याग्स: pressure low